Ixesha kunye nabahlobo 38
Ilungelo lokushicilela, i-1912, nguHW PERCIVAL.
Yintoni Eyidla Ukutya?
Ukunambitha ngumsebenzi wefomu yomzimba wokubhalisa amaxabiso kunye neempawu kulwelo kunye nolwelo. Akukho kunambitheka ekutyeni kude kufike amanzi adibanise ukutya nolwimi. Ngokukhawuleza xa amanzi, umswakama, iswekile, izise ukutya kulwalamano kunye nolwimi, ilungu lokungcamla, imithambo yolwimi ngoko nangoko idlulisela kwimo yomzimba iimpembelelo zokutya. Ngaphandle kwamanzi ukwenza unxibelelwano phakathi kokutya kunye nethambo lolwimi, iintlungu azinakudlulisela impembelelo yokutya emzimbeni wefom kwaye umzimba wefomu awunakwenza umsebenzi wawo wokungcamla.
Kukho ubudlelwane obufihlakeleyo phakathi kwemizimba eneempawu zokungcamla, iintlungu kunye nomzimba womzimba, kunye namanzi. Ubudlelwane obufihlakeleyo sisibopho esibangela ukuba la macandelo mabini e-hydrogen kunye nenxalenye enye yeoksijini abe koko sikubiza ngokuba ngumanzi, ohlukileyo kolunye lweempawu ze-hydrogen okanye ioksijini apho amanzi eqokelelweyo. Kukho amanzi kuyo yonke incindi yokutya. Umdibaniso odibanisa ezi gesi zimbini ukuvelisa amanzi kukudityaniswa okufanayo okuhlanganisa ukutya, izintso kulwimi, amanzi kunye nomzimba.
Nanini na xa amanzi enyama enxibelelanisa inqaku lokutya kulwimi, into efihlakeleyo emanzini ikhoyo kwaye isebenza kwangoko kwifomu yomzimba, ukuba iintlungu zolwimi zihleli. Into efihlakeleyo emanzini ehambelana nokutya kulwimi iyafana emanzini nakokutya nakulwimi kunye nerve. Into efihlakeleyo yeyona nto iyinyani, into yokusebenza kwamanzi omlingo. Amanzi esiwaziyo yimbonakalo yangaphandle kuphela kunye nokubonakaliswa kwamanzi anobuqili bokufihlakeleyo. La manzi angafihli nto yinto yokuba umzimba ngokwawo ubunjwe ngokuyintloko.
Ukunambitha kungumsebenzi okweli hlobo lomzimba wokuzithabathela kuwo ngokusebenzisa izinto zalo zemilingo izinto ezikhoyo ezinesiseko okanye iimpawu ezifumaneka kukutya. Ukunambitha ngumsebenzi wefom yomzimba, kodwa ayisiwo kuphela umsebenzi. Ukunambitha yenye yeemvakalelo. Umzimba wefom sisihlalo sayo yonke imizwa. Umzimba wefom ubhalisa zonke iimvakalelo. Uvavanyo lubonwa ngumntu kuphela ngomzimba. Umzimba wefom uhambelana nengqondo nganye nenye. Iinjongo zeemvakalelo kukuba umntu ngamnye kufuneka afake isandla kulungeko lomzimba ngokubanzi, ukuze umzimba ube sisixhobo esifanelekileyo sokusetyenziswa nokuphuhliswa kwengqondo. Injongo yokungcamngca kukuba ngayo umzimba unokuthi ubhalise iimvakalelo eziveliswe kukutya ukuze ukwahlule phakathi kwabo unqabe ukutya okungekho mfuneko kwaye kwenzakalisayo, kwaye ukhethe kuphela olona hlobo lufanelekileyo kakhulu ekusebenziseni kwengqondo ekwakheni nasekulondolozeni ubume bomzimba kunye nomzimba wefom.
Ukungcamla kuya kukhokelela emadodeni nakwizilwanyana ezithile ukuba kukuphi ukutya okufuneka kakhulu kwaye kube luncedo emzimbeni, ukuba amadoda kunye nezo zilwanyana ziphila ngendlela eqhelekileyo nangokwemvelo. Kodwa amadoda akaqhelekanga kwaye ayindalo, kwaye ayizizo zonke izilwanyana, ngenxa yefuthe umntu azileyo kwaye azizisela.
Ingqondo yokubetha phantse inxulumene nokutya kunye nokunambitha ngaphezu kwazo naziphi na ezinye izivamvo kuba ivumba kufuneka lingene ngqo kwaye lihambelana nomzimba, kwaye ukutya kwenziwa ngezinto ezingena kulwakhiwo lwento yomzimba.
Ngaba unambitha ekutya ukutya nawuphi na umgangatho wokutya ngaphandle kokutya?
Ibe. Ukutya okuqatha kuyondla ngokwasemzimbeni. Into efihlakeleyo yobugqi, amanzi, ekubhekiselwe kuwo, kukuondla kwisimo somzimba ngaphakathi emzimbeni. Ukungcamla kwento yobugqi kuyasondla kwinto yesithathu engaphakathi kunye nomzimba wayo. Emntwini, le nto yesithathu ayisiyiyo ifom, nangona ivezwa ngeendlela ezikhethekileyo ngohlobo lwezilwanyana. Le nto yesithathu efumana isondlo emntwini ngenxa yokutya kukunqwenela. Umnqweno ufikelela kwiimvakalelo kwaye uzisebenzise ukutsala ngokwakho ukoneliseka okufumaneka kuyo yonke imvakalelo. Ingqondo nganye ke ilungiselela umnqweno. Nangona kunjalo, ingcinga ekhethekileyo ehambelana nomnqweno, kunye nomnqweno osebenzayo ukunxibelelana nezinye izivamvo, kukuchukumisa okanye ukuziva. Ke umnqweno unxibelelana ngokwentwana yokunambitha, kwaye utsala ingqondo yokungcamla i-A1l ulonwabo olunokufumaneka kuyo ngokutya ngokungcamla. Ukuba umzimba wefomu uvunyelwe ukwenza umsebenzi wakhe wokungcamla ngaphandle kokuthobela iminqweno yomnqweno, unokukhetha ngokuzenzekelayo kuphela ukutya okunjalo njengoko kufuneka ukugcina uhlobo kunye nolwakhiwo lomzimba. Kodwa umzimba wefomu awuvumelekanga ukukhetha ukutya okufuneka kakhulu. Umnqweno ulawula isiqu somzimba kwaye uyisebenzisa ukufumana ulwaneliseko lovakalelo olungenakufumana ngaphandle komzimba. Uhlobo lokona lonwabisa inkanuko, umnqweno ufuna ngokomzimba, kunye nendoda, bekhohlisiwe kukukholelwa ukuba umnqweno ungowakhe, unika amandla ngokubanako ngokubonelela ngokutya okunjalo ngokungafunekiyo ngokungcamla. Ke incasa ihlakulelwe ukwanelisa umnqweno, isigebenga sesilwanyana esingenangqondo, esiyinxalenye yokwenziwa komntu. Ngokubonelela ngokufunwa kweminqweno ngokutya okukhethiweyo kuthathwa emzimbeni okwenzakalisayo kulondolozo lwayo, kwaye ekuhambeni kwexesha imeko yayo eqhelekileyo iyaphazamiseka kwaye iziphumo zempilo ziyagula. Indlala ayifanele ingabhidaniswa nokunambitheka. Indlala kukunqwenela kwendalo kwesilwanyana ukwanelisa iimfuno zayo. Ukunambitha kufanele ukuba yindlela isilwanyana esinokukhetha kuyo ukutya okufunekayo kulondolozo lwayo. Ezi zilwanyana zikwisimo sasendle, kwaye kude nempembelelo yomntu, ziya kuyenza. Isilwanyana esisemntwini, umntu uhlala edideka aze azazise ukuba ngubani. Ekuhambeni kwexesha iindlela zokutya sele zilinyiwe. Umnqweno okanye isilwanyana emntwini sondliwe ngokutya okufihlayo ekutyeni, kwaye isilwanyana siwulahle umzimba weefom kwaye siwuthintela ekwenzeni imisebenzi yayo yendalo kulondolozo lwempilo yomzimba wonke nasekusebenzeni njengendawo yokugcina amanzi Ubomi obunokuthi umntu abusebenzise bona busebenze emhlabeni.
Ukunambitha kunexabiso ngaphandle kokutya. Ixabiso layo kukondla umnqweno, kodwa ukuyinika kuphela ukondla okudingayo, kwaye ungakwandisi amandla ayo ngaphaya koko umzimba unokukwazi ukukuthwala.